ဗဟုသုတအစုံ Archives - Mingalarday
Home > ဗဟုသုတအစုံ
ကြည့်ရှုသူ (၄)သိန်းခွဲကျေ်ာသွားတဲ့ DJ SODA ရေကစားနေတဲ့ ဗီဒီိယိုဖိုင်
DJ Soda ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ DJ မလေးပါ။ အာရှမှာဆိုရင် ပုရိသတွေ အရမ်းကိုကြွေတဲ့ DJ... Read More
သူစိမ်းတွေက သင့်ကို ချက်ချင်းခင်မင်သွားစေမည့် နည်းလမ်း(၇)ခု
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုမရှိသေးတဲ့ လူစိမ်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှုဟာ နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးထူးချွန်သူတွေအတွက်ကတော့ သူစိမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတိုးပြီး ပျော်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့... Read More
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင် ဘွဲ့ရအများစုကို ‘ဘွဲ့ရပညာမတတ်’ ဟူ၍ စွပ်စွဲပြောဆိုကြသည်။
မြန်မာလိုသင်တဲ့တစ်နေ့ဘွဲ့ရရ-မရရ ပညာတတ်တွေပေါများလာမည် ဒေါက်တာခင်မောင်ညို ***ဘွဲ့ရ နှင့် ပညာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင် ဘွဲ့ရအများစုကို ‘ဘွဲ့ရပညာမတတ်’ ဟူ၍... Read More
ဟိုလူ ဝတ်ထားတဲ့ခါးပတ်က ၁၄ သိန်း !!! အော် … ရူးနေတာ ငါသာဆို မဝယ်ဘူး
ဟ … ဟိုကောင် ဝတ်တဲ့ခါးပတ်က ၁၄သိန်း!!! အော် … ရူးနေတာ ငါသာဆို မဝယ်ဘူး... Read More
လူအလုပ်​လူလုပ်​…​ ခွေးအလုပ်​ ​ခွေးလုပ်​​ပေါ့..
April 19, 2018 MinGaLar Day
လူအလုပ်​လူလုပ်​…​ ခွေးအလုပ်​ ​ခွေးလုပ်​​ပေါ့… မိုးတွေ တအားရွာပြီးမြစ်ထဲမှာ ရေတွေပြည့်သွားတယ်။ ရေစီးကလည်းသန်တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ TV မှာ... Read More